News - Onu ahia nke uwa dum nke ndi oru mgbanwe karia 100 ijeri na 2020
Ọnụ ọgụgụ ahịa ụlọ ọrụ mgbanwe ụwa ga-agafe 100 ijeri na 2020
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, nnyefe ikike ụwa na nkesa akụrụngwa ahịa na-achọkarị n'ogologo.
Mgbasawanye ihe ọkụkụ, uto akụ na ụba na ikike ike na mba ndị na-apụta ga-akwalite ahịa mgbanwe ike ụwa site na $ 10.3 na 2013 ruo $ 19.7 na 2020, yana mmụba kwa afọ nke 9.6 pasent, dị ka ụlọ ọrụ nyocha.
Ọganihu ngwa ngwa na-achọ ike na China, India na Middle East bụ isi ihe na-akpata atụmanya a na-atụ anya na ahịa ike mgbanwe ụwa. ahịa.
"GRID dị na UK adịla ezigbo ogbenye ma ọ bụ naanị site na dochie anya na ịkwalite grid ahụ mba ahụ ga-enwe ike izere blackouts. N'otu aka ahụ, na mba ndị ọzọ dị na Europe, dịka Germany, enwere nrụzigharị na-aga n'ihu na ntanetị na eletrọniki. iji hụ na ọkụ eletrik na-aga n'ihu. "Ka ụfọdụ ndị na-eme nnyocha na-ekwu.
N'uche ndị ọkachamara, enwere ihe abụọ maka ike uto siri ike nke ọnụ ọgụgụ ahịa mgbanwe ụwa. N'otu aka, nwelite na mgbanwe nke ndị na-atụgharị ọdịnala ọdịnala ga-eweta oke ahịa ahịa, na mkpochapu ngwaahịa na-ala azụ nwere ike ịkwalite mmepe dị mma nke ịnye na inye aka, na nnukwu uru akụ na ụba ga-apụta.
N'aka nke ọzọ, nyocha na mmepe, imepụta ihe, ire ahịa, ojiji na ndozi nke nchekwa nchekwa na ndị nwere ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi ga-abụ isi, ngwaahịa ọhụrụ ga-ewetakwa ohere mmepe ọhụụ maka ụlọ ọrụ ahụ.
N'ezie, ụlọ ọrụ na-emepụta ihe nrụpụta na-adabere na itinye ego site na ụlọ ọrụ ndị dị ala dịka ike ọkọnọ, grid ike, metallurgy, petrochemical ụlọ ọrụ, ụgbọ okporo ígwè, iwu obodo na ihe ndị ọzọ.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, na-erite uru site na mmepe ngwa ngwa nke akụ na ụba mba, itinye ego na ntinye nke ike ọkụ na grid ike na-arịwanye elu, ahịa ahịa maka nnyefe na nkesa akụrụngwa arịwanye elu. A na-atụ anya na ahịa anụ ụlọ na-achọ onye ntụgharị na ngwa nnyefe na nkesa ndị ọzọ ga-anọ n'ọkwa dị elu ruo ogologo oge.
N'otu oge ahụ, steeti gọọmenti na-arụ ọrụ n'etiti nnukwu mpo na atụmatụ mmepe maka ụlọ ọrụ ike eletrik niile nwere mmetụta dị ukwuu, akpaaka nkesa ntanetị yana mmejuputa ọrụ retrofit ga-eme ka ahịa ahịa na-agbanwe agbanwe, ọnụahịa ahụ ga-abawanye ọnụ ọgụgụ ahụ nke ngụkọta ahịa transformer zuru ụwa ọnụ ga-eji nwayọọ nwayọọ gbadaa na China, a na-atụ anya itinye ngwa ahịa ndị na-egbu oge iji nweta mmetụta ka mma na China.